रियाको सपोर्टमा ट्विंकल खन्ना बोल्दा ट्रोल बने अक्षय! - Bigul News
भदौ ३१, २०७७ SLPA
विद्या बालन, स्वरा भास्कर, शिबानी दांडेकर, तापसी पन्नूपछि अब अक्षयको श्रीमती ट्विंकल खन्ना पनि रिया चक्रवर्तीको सपोर्टमा आएकी छिन्। रिया चक्रवर्तीलाई सुशांत सिंह राजपूतको मृत्युपछि मुख्य आरोपी मानिएको छ। साथै अहिले ड्र-गको कारण अभिनेत्री जेलमा छिन्। यसैबीच ट्विंकल खन्नाले रियालाई सपोर्ट गरेकी छन्।
एक लीडिंग टेबलाइडको खबर अनुसार ट्विंकल खन्नाले रिया चक्रवर्तीलाई सपोर्ट गरेर मीडियामा निशाना बनाउदै भनेकी छन् ,”लागिरहेको छ कि जसै स्टेजमा इन्टरटेनर मनोरंजन देखाईरहेका छन्। तर मान्छेहरु यस कुराबाट अंजान छ कि उसको कुरा साँचो हैन। मिडिया रियालाई लिएर यस्तो कुरा गरिरहेका छन् कि जसको सिर र पुच्छरको पत्तो छैन।”
ट्विंकल खन्नाको यस बयानबाट सुशांतको फ्यानले ट्रोल गर्न थालेका छन्। यति मात्र नभई ट्विंकलको यो बयानको कारण अक्षयले भोग्नुपर्यो।
सधैँ आफ्नो राय राख्ने अक्षय कुमारले अहिले शिवसेना र कंगनाबीच भएको जंग साधेका छन् । जसलाई लिएर आफै शिवसेना नेता संजय राउतले भने ‘कम-से-कम आधा हिन्दी फिल्म जगतले मुम्बईको अपमानको विरोधमा अगाडी आउनुपर्थ्यो । कंगनालाई पुरै फिल्म जगतको मत छैन। कम-से-कम अक्षय कुमार जस्ता ठुला कलाकार त अगाडी आउनुपर्थ्यो। सुशांतको मृत्युपछि मामला ड्र’ग एंगल बाहिरिएको थियो त्यसपछि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जेलमा छिन्।
प्रकाशित : बुधबार, भदौ ३१, २०७७०६:२३
यसकारण अनुष्का शर्माले प्रभासको ‘आदिपुरुष’ बाट निकालिन हात!
२० मिनेट अगाडि SLPA